DAAWO: Maxaa looga hadlayaa kulanka albaabadu u xiran yihiin ee Deni & Xildhibaanada Puntland ? – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
DAAWO: Maxaa looga hadlayaa kulanka albaabadu u xiran yihiin ee Deni & Xildhibaanada Puntland ?
June 18, 2022 Xuseen 24
Farriimo xalay loo diray Xildhibaanada Golaha Wakiillada Puntland ayaa lagu wargeliyay inay kasoo qeybgalaan kulan qado ah oo uu ku casuumay axadda berri ah, Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni.
Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Puntland, Cabdirashiid Yuusuf Jibriil oo ka hadlayay kulan maanta ay yeesheen Xildhibaanadu ayaa sheegay inuu kulanka Madaxtooyada uu yahay mid albaabadu u xiran yihiin, oo ay Xildhibaanada iyo Madaxweyne Deni uga wada-hadli doonaan xaalada guud ee Puntland, ayna su’aalo weydiin karaan Xildhibaanadu.
Sida ay fahansan tahay PuntlandTimes, Siciid Deni ayaa kulanka axadda kala hadli doona Xildhibaanada xaalada Guud ee Puntland iyo qodobada kamidka ah Ajandaha Kalfadhigga 50-aad, ee saameynayo Madaxweynaha.
Mawada shaqayn karaan Deni iyo Crash. Puntland needs stability, not an Old Fart like Karaash.
Waar xishood oo ha isticmaalin hadalka qaarkiis.
Budhleeyn waa sakaraad .. malakul moowd kii baa haya 🤷‍♂️😱😢
wagarey sansibaarka markii la soo furtay ow ku hungobay madaxweyne iyo raisalwasaare ayuu rabaa inow eryo walee waa markii majeerteen ay ku harilahayeen putland warsangali teg somaliland ayuu ku biiray dhulbahante horay ayuu ugu biiray
mar dhow xuduuda dhinaca bari waa la soo xiraa kkk
Jamiila Caddey says:
Dhulbahante iyo Warsangali, waa cayayaan ku nool dhiigga Majeerteen. Haddii ay Puntland ka baxaan dhib iyo shiddo ayey nagala tageen waana ku faraxsannahay.
Khamiistii ina dhaaftay wuxuu Karaash diiday inuu ka qayb galo
kulankii wasiirada Puntland. Waxaa ku adkaatay inuu hor fadhiisto
wasiiradii uu dhawr asbuuc ka hor FB saqdii ku shaaciyay inuu bedelay!
Wasiiradii MJ ee uu bedelay igawala inaanay ficil celin daaye juuqba
ka odhan qoraalka Karaash. Odaygu Garoowe waa ku dulsaar aan miisaan
siyaasadeed lahay, warbaahinta PL ( marka lagu daro baraha bulshada)
ka hadli karo inuu wax ku qorana weligii looma fasixayn waayo
kalsooni kuma qabaan madaxda Puntland.
Laleys manin dhulkisii bixiyay baa tayda igu xukumaya caqligu hashaqeeyo
Dani waa qof sinsibaar ah waana dabo dhilif ushaqeeya imirat iyo kenya waana uu fashilmay xaqiiqdii
Deni lama shaqayn karo Karaash markaa odaygu isagaa noqday marti
edebdaran ee saligiisa haka laalaabto madaxtooyada hadii kale hore
saan u sheegay wadadii Dhoobo-daareed ayaa lamarin.
Deni wixii bilaabayaa inuu Puntland ka safeeyo agoontii kacaanka
ee Farmaajo taageersanaa. Good Job madaxweyni!
Deni,haddii ceeb ,fashil Siyaasadeed loo dhinto Asagaa u dhiman lahaa,laakiin wuxuusan laheyn damiir uu ku xisaabtamo.
Waxaay ila tahay iney ku qurux badan tahay in Deni talada maamulka ku wareejiyo ku xigeenkiisa waana sida ay ugu qurux badan tahay.
Deni is a death walking man.
tarahaan waxaa iska leh ciise mohmuud hadii ay waayaana pl waa lagu kala guurayaa sinsibaarba meesha uu kayimi ayuu aadaayaa taas baa xaqiiq no more dabo dhilif
Guusha laga soo hoyay Villa Soomaaliya Karaash waxba kuma lahan xaqna uma lahan miraheeda in uu wax ka gurto, it is time for him to go. Farmaajo oo Soomaaliya god ku ridi rabay ninkii u hiiliyay, wallaahi baan lacafinayn.
Waa ogahay Iidoor in ay fursad ka raadinayaan arintan, iyaga oo isleh Karaash ayaa ictiraaf idiin keenaya,kkk,, Waxaan soo xasuustay oraahdii ahayd “Cubeed maa Tacrif” Ciidan Dhulbahante oo tuute Somaliland xiran ayaa idiin jooga, ictiraaf maku hesheen?
Boowe soo dhawaada
Maanta waxan rabaa inaan idiinka warbixiyo waxa nagasoo qabsaday Xamar.
-Khayaamo ayaa lanaku sameeyay
-Waad aragtaan sida Rw lanoogu diiday,loona diiday baaqii Abwaan ee ahaa in Xasan Sheikh hilmaamin kaalinta àan isbedelka Ku lahayn,dhegna looma dhigin
-Maxaa talo ah?
-Qaab noocee ah ayaan kula dhaqanaa dawlada Xamar fadhida?
-PL ha isku tashato
-Gudaha ceebo badan oo saxitaan u baahan baa muuqda,waxana codsanayaa in la wada shaqeeyo.
Boqor Saciid Cabdullaahi Deni waa in uu sida ugu dhaqsiyo badan isu dhaafiyaa odeygaan sirqada ah balwada dilootey ..
Culeeys mooyee muxuu Ku darsadey Puntland..
Deni is casilaada uu xubnaha u sheegayo muu baarlamaanka hortiisa ka sheego?
Karaash wuxu waday badbaadada PL iyo in loo xafido lacagta shacabka,lagana ilaaliyo Deni,balse iimaan laawayaal ma helin taageeradiina,balse maanta ayaad magac xumo,guul darro,maamul dakhli la’aan ah idin hor taalaa!!!!
Kab ka dalbada Xasan Shiikh hadaad ka helaysaan waxba ha qarsanina jabkee
Waxa Soomaaliya ka socda,maamulada hab beeleedka ku dhisan guud ahaan.
Bak eeg gooni u goosatada deegaanada dhexe oo madaxa is kula jira,runtii banaan ka keenay in beel Soomaaliyeed aysan qaran noqonayn .
Xaga Puntland maamul beeleed kii ka wada dhistay,waa shaqayn waayey ,waayo maamulkii iyo siyaasadii oo dhan,ayaa ku soo ururay,beel qura,taasina waa tan keentay,beelaha Sool iyo Sanaag Bari ay ka baxsan maamulka ado oo ay dhistaam mid u gooni ah,sanaag vari oo gaar iyo Sool oo gaar ah,taasi ayey noqon mida hada wax u socdaan.
Maamul beeleed waxa uu noqon mid aan shaqaynayn.
Runtii odayga Karaash ah waa marti edeb daran sidaad u sheegtay markuu Puntland joogo, waayo isagaa dhulkiisii baxshay oo reero dhulkood ayuu kala taliyaa, laakiin waxaa hubaal ah inuu marti edeb leh noqonayo markuu Hargeysa tago, waayo Hargeysa waxaa uga horreeya feerkii Cirro iyo caydii Nuux Taani. Iminka waaba la hadal hayaaye hadduu Hargeysa tago wax sheegayaba lama maqli doono.
Saylici ayaa booskiisa joogee miyaad weli maqasheen wax sheegaya xataa shacabka reer Somaliland weligood ma maqal inkastoo uu shan iyo toban sano madaxweyne ku xigeen ahaa.
Adiga laalays ah waxaa tahay harti Somaliland baqdin awgeed la taageera.
CAYAYAAN MAXAA WAX SOO QORAYAAN.
DENI KUWA ZINJIBAARI KU SHEEGAYA MIYUU GUURSAN LAHAA QURUXDIISA IYO FOOLXUMIDIISA MAXAA KA GALAY?
KUWA SUGAYA IN PUNTLAND ISKU DHACDO MIYEEDAN DAALIN MA QUUSATAAN MIYAA?
DENI,KARASH,IYO CABDIRASHID WAA IS FAHMAYAAN INSHALAAH.
kkk sansibaarka xaalada waa ku xuntahay
sidii farmaajo loo tuuray baa loo tuuraya
war dhamayso sanadka iyo bilooyinka kuu dhiman si nabad kursiga waxaa kaa sugaya ciise maxamuud sida caadada ahayd ileen kursiga sida caadada ah waxaa u kala kaltama 3 reer maxamuud Kkk
Balbalaarka ayaa Deni jacayl u qaaday
Mahad.You not Karaash-
“ YOU FART BECAUSE IT IS THE ONLY GAS YOU CAN AFORD “
Laalays. Waxa aad tahay,waa uun caliishii u shaqayste ( mercenary ) .
Arimaha ka taagan deeganada dhexe ee gobolada waqooyi ee Soomaaliya ee ka baxay Somaliland,bal iyaga ayaa kaaga baahan in aad u sheegto,in beel Soomaaliyeed aysan qaran noqonayn.
War Riyad iyo beebtii socon wayday ee Soomaaliya dhiniciina ka raaca.
SAMA-WADO MA WAXAY RABTAA IN AY NOQOTO MINYARADA SACIID DENI?
SIS SIYAASAD KA HADAL SACIID DENI AMA SINJIBAAR HA U EKAADO AMA CARAB HA U EKAADO WHO CARES?